Andranomena sy Ambatomena indray no fotoana ! – MyDago.com aime Madagascar
Andranomena sy Ambatomena indray no fotoana !
Andraharo 10 Martsa 11
Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’I Jean Louis RAKOTOAMBOA teny amin’ny kianjan’ny Magro androany dia nilaza izy fa fongorona hatramin’ny fakany ny krizy, izany no tanjon’ ny ankolafy telo hoy hatrany ny tenany . Koa rehefa tonga ny fifidianana dia mahazo milatsaka izay milatsaka ary raha te handeha amin’izany i Andry dia arahabaina soa fa raha tsia dia miala izy.
Nanao tatitra momba ny fanaterana ilay atonta-taratasy teny amin’ny masoivoho ihany koa Rakotoamboa. Rahampitso dia eny Andranomena ary ny hariva dia any Ambatomena no fotoana indray izay hitenenana fa tsy mety ny fanohananareo mpanongam-panjakana, mila hery isika ka tongava daholo hoy ny filoha nasionalin’ny Teza
Kianja Magro 10 Martsa 11
Ny Sekretera Jeneralin’ny antoko TIM, Mamy RAKOTOARIVELO dia nanambara fa tsy ekena ny “feuille de routen’i Simao” amin’izao fotoana izao ary fahalalam-pomba no nahatongavana tany. “Feuille de présence » no natao sonia ary tsy nanao rango-pohy izahay ankolafy Ravalomanana. Mila ny fodian’ny filoha Ravalomanana maika isika hoy Rakotoarivelo. Nihaona tamin’i Simao izahay ary tsy nety nandray ny taratasy fangatahana izy raha tsy manao rango-pohy izahay. Aleo ny filoha Ravalomanana no manao rangom-pohy raha mety izy. Ny sasany tia seza no maika hanao rango-pohy ka mihazakazaka, ny ankolafy telo kosa dia tsy maintsy mijoro, mitaky “conférence au sommet” ny mpanao politika ambony ary tsy hisaraka isika raha tsy tratra ny tanjona.
Magro, Hisy sori-dalana vaovao indray !
Auteur Solo RazafyPublié le 10 mars 2011 10 mars 2011 Catégories Magro, Malagasy, Négos, Politique
4 réflexions sur « Andranomena sy Ambatomena indray no fotoana ! »
11 mars 2011 à 5 h 22 min
Misaotra anareo any antanindrazana éééééé
Aza adino ny gadra politika namantsika rehetra ry namana. Aza adino koa ireo nikarakaa ny radion’ny gasy. Nafindran’ny foza an Tsiafahy ireo omaly, fa na lavitra aza dia aza ré Tompoko oooooooooo.
11 mars 2011 à 8 h 17 min
Mankahery hatrany satria tena mbola lavitra hezaka ity ady @ tsy ara-dalàna ity. Avondrony ny hery ary aoka tsy ho mora ho zarazaraina
11 mars 2011 à 9 h 26 min
Aza MANAIKY ZARAzarain’ny vahiny miintsy ,ireto tsotsoka mitsabaka ny raharahmpirenena Malagasy sy Afrikana ! MAIKA hangalatra ny harempirenen’ny firenena madinika fotsiny nefa may vava milaza tsy mila an’ny Afrika ilay rangahy fohy kely io!!!
11 mars 2011 à 9 h 35 min
Mapmé be le dremiseza alin mpitady seza sy mpivadika palitao fa nony injay nataon’i FETISON hoe: soava dia ianao sy ny feuille de route ny sima o dia sadaikatra
beuh,miodikodina beuh! an§ an§ mbola afaka manampy nareo fa Ambava hihihihi angaha tsy efa nahazo 99,99% T@NY REFERENDUM RIDICULE TENA TOUTOU mivadika tsy tahotra tsy henatra !ty dremi SEZA ,MALHEUREUSEMENT LE RIDICULE NE TUE PAS !!!
f’abagaha tsy enao ry dremi seza le hitan’ny olona tanaty 4*4 namono MALAGASY IRAY RA aminao ,zay mi rouler « R » OHATRA NY TAMBANIVOHITSA !any ampita any ange ka ny tamabawax no mi rouler « R »,ry faty mianakavy mi rouler R DAOLO !TAOLANA NY NIFY DIA MIHOMEHY NY TENA é!
Précédent Article précédent : Communiqué, Réserves de la mouvance Ravalomanana sur la feuille de route
Suivant Article suivant : Réaction du GTT International Genève